Mareykanka oo baaraya Soomaali u jihaad doontay Suuriya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareykanka oo baaraya Soomaali u jihaad doontay Suuriya
Washington – Mareeg.com: Dalka Mareykanka waxaa la baarayaa warar soo baxay oo sheegaya in dhallinyaro asal ahaan Soomaali ah ay aadeen dalka Suuriya si ay uga barbar dagaallamaan jabhadaha Islaamiyiinta ah eek u kaxsan nidaamka madaxweyne Bashaar Al-asad.
Hay’adda FBI ee dalka Mareykanka ayaa baaritaan ku sameyneysa rag asalkoodu yahay Soomaali oo ka barbar dagaallamaya mucaaradka Suuriya, kuwaas oo ka tagay magaalada Minneapolis oo ay ku badan tahay Soomaalida.
Afhayeenka xafiiska FBI ee magaalada Minneapolis, Kyle Loven ayaa sheegay in bilihii la soo dhaafay uu xafiisku helay warbixinno caddeynaya in 10 ilaa 15 nin ay ku biireen mucaaradka dalka Suuriya ee dagaalka kula jira madaxweyne Bishaar Al-Asad.
Afhayeenka ayaa xusay in ay FBI aaminsan tahay in raggaas ay ku biireen koox ka dagaallanta Suuriya oo uusan magacaabin, sidaana waxaa laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters.
Waaxda Caddaaladda, hay’adda FBI iyo wakaaladda Sirdoonka Mareykanka ayaa dhowaan u xilsaaray kooxo gaar ah iyo xiriiriyeyaal la socda socdaallada noocan oo kale.
Wararka ayaa sheegaya in dhallinyaradan Soomaalida ah markii ay ka baxeen Mareykanka ay tageen Turkiga, kadibna uga gudbeen Suuriya si ay ugu biiraan kooxaha Islaamiyinta ah ee Jihaad doonka ah.
FBI –da Maraykanka ayaa sanadkii 2007-dii kordhisay baaritaannada lagu sameynayo suurtagalnimada Soomaali ka tagtay Mareykanka oo ka barbar dagaallamay Al-Shabaab oo xiriir la leh ururka Al-Qaacidda.
Dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo kazoo tegay dalka Mareykanka ayaa horay ugu biiray Alshabaab, si ay ula dagaallamaan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ee AMIOSM.
Dowladda oo rabta iney dib u daabacdo kunka shilin Soomaaliga
Wareega labaad ee doorashada madaxweynaha Afghanistan